ကျောက်ခေတ်စက်, သဲချမှတ်ခြင်းစက်, ကျောက်ကြိတ်ခွဲစက်ရုံနှိမ်နင်း
သဲစန္ဒရားပြုလုပ်သူများသည် & အဝတ်လျှော်
မိုဘိုင်း Crush စက်ရုံ
ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း filter များ
ကျနော်တို့ Customer များကျေနပ်အဆင့်မြင့် Cone နယ် Make ပါလိမ့်မယ် ဖောက်သည်များ '' စိတ်ကျေနပ်မှုစျေးကွက်၏အခြေခံနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကတည်းကနှစ်ပေါင်းဤနည်းဥပဒေကပ်ခဲ့သည်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများနှင
မိုဘိုင်း Crush ဘူတာအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများများအတွက်အကူအညီဖြစ်ပါသည်
crawler အမျိုးအစားမိုဘိုင်းနယ် သာ. ကောင်း၏သလားနိုင်ပါတယ်
ကျနော်တို့ Customer များကျေနပ်အဆင့်မြင့် Cone နယ် Make ပါလိမ့်မယ်
Tarzan သဲ၏အလုပ်အဖွဲ့ Way ကိုစက်ရုံ Making
Tarzan (ရှန်ဟိုင်း) Machinery နည်းပညာ Co. , Ltd မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပစ္စည်းကိရိယာများ R & D, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး, ပစ္စည်းကိရိယာများရောင်းနှိမ်နင်းခြောက်သွေ့သဲပစ္စည်းကိရိယာများကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတရုတ်, Fengxian ခရိုင်, ရှန်ဟိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံဖန်သားပြင်တုန်ခါသမားရိုးကျမေးရိုးနယ်, သက်ရောက်မှုနယ်, ထုတ်လုပ်, ဒါပေမယ့်လည်းထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်မသာစသည်တို့ကို 2000 နှင့်ထိုကဲ့သို့သော AAA ကျော်ကြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်အောင်မြင်ရန်: ကျနော်တို့သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ခွင့်၏လိုင်စင်ရှိသည်, ငါတို့သည်လည်း ISO9001 ၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ယူရို-စတိုင်မေးရိုးနယ် / ယူရို-စတိုင်သက်ရောက်မှုနယ် / ဝင်းကန်တော့ချွန်ဒါပေါ်မှာနယ် / ဟိုက်ဒရောလစ်ကန်တော့ချွန်နယ် / နောက်ဆုံးပေါ် TVSI စနစ်အားသဲစက်နှင့်တူသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပထမဦးဆုံးအတန်းအစားပစ္စည်းကိရိယာများ။
စုံလင်သောအရည်အသွေးမြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိပါတယ် Tarzan, စုဆောင်းအခြားသူတွေနည်းပညာ advanced နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကတီထွင်ခြင်းနှင့်ထိပ်တန်းထုတ်ကုန်တွေနဲ့သူတို့ကိုပေး။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်ပြည့်စုံဝန်ဆောင်မှုဒီဇိုင်း, ရောင်းချခြင်း, ပစ္စည်းကိရိယာများဒီဘာဂင်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများပါဝင်သည်ကိုပေး။ ထိပ်ထမ်းအလုပ်သမားထိပ်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း, ထိပ်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်နှင့်ထိပ်ဝန်ဆောင်မှုပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတရုတ်နိုင်ငံတွင်ထိပ်တဦးတည်းဖြစ်စေရနျကြှနျုပျတို့၏အကောင်းဆုံးလုပ်နေတာ။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများရောင်းချသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုတင်ပြသည့်အခါ Tarzan အမြဲ "ရိုးသားမှု, အရည်အသွေးမြင့် & ပထမဦးဆုံးအတန်းအစား" ၏စိတ်တွင်စောင့်ရှောက်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို. ပို. ပိုမိုစုံလင်လာဖောက်သည်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများကိုပိုမိုတန်ဖိုးအားကိုပေးနိုင်သည်။
ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံကမိုဘိုင်းနယ် site ကိုမြေပုံ
အယ်လ်ဂျီးရီးယား 300 t / h သောကျောက်နယ်စက်ရုံတပ်ဆင်ခ site ကို
ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ 500-800 တန်ချိန်
Gansu ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတပ်ဆင် site ကို
ယင်းမော်တာ၏လည်ပတ်သည့် fixed ရိုးပတ်ပတ်လည်စက်ဝိုင်းဖို့ခါးပတ်ဘီး, နားချင်းဆက်မှီ, ဂီယာဝင်ရိုးနှင့်ကန်တော့ချွန်စက်ကိုတဆင့်စားပြီးဘုရှ်တို့ကမောင်းနှင်နေသည်။ ကန်တော့ချွန်နယ်၏နှိမ်နင်းရိုးညှိစွပ်အိတ်များ၏လ...
နှစ်ဆလိပ်နယ် To-ဖြစ်-စိတ်ပျက်ပစ္စည်းများအစိုဓာတ်ကိုပေါ်မဆိုလိုအပ်ချက်များခြင်းမရှိဘဲ, ကြီးမားတဲ့လျှော့ချရေးအချိုး, ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်နိမ့်သံ, နည်းနည်းတုန်ခါမှုနည်းဖုန်မှုန့်, အနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု,...
လူပျို Cylinder Hydraulic Cone နယ်အကြိမ်ရေများနှင့်မတူနှိမ်နင်းရဲ့အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ချမှတ်၎င်း၏နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရထုတ်ကုန်အရွယ်အစားဘယ်လောက်သေးငယ်သည်။ ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ပါဝါစားသုံးမှုကြိတ်ကိုအလွန်ကို...
သတ္တုတူးဖော်ရေးစက်တစ်မျိုးအဖြစ် gyratory ကန်တော့ချွန်နယ်အဆိုပါသတ္တုဓာတ်နဲ့ကျောက်ကြမ်းအစေ့ကိုချိုးဖျက်နိုင်ပါ။ မြင့်မားသောကြောင့်လျှော့ချမှုနှုန်း၏အင်္ဂါရပ်များ, မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းနှင့်ယူနီဖောင်းဓာ...
Tarzan စက်တရုတ်တွင်ကျော်ကြားဟိုက်ဒရောလစ်သက်ရောက်မှုနယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး, Tarzan ကထုတ်လုပ်သည့်ဟိုက်ဒရောလစ်သက်ရောက်မှုနယ်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းနည်းပညာ, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံ, ထိတ်လန့်ခုခံအားနှိမ်နင်းန...
အဖြစ်က high-ထိရောက်မှုကြိတ်ခွဲစက်, သက်ရောက်မှုနယ်သို့မဟုတ်အနိုင်အထက် impact သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား, ရိုးရှင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, မြင့်မားသောအချိုးနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားအထွက်နှုန်း, အညီအမျှထုတ...
အဆိုပါဟိုက်ဒရောလစ်မေးရိုးနယ်မှာလည်းကျားပါးစပ်ဟုခေါ်သည်။ Tarzan မေးရိုးနယ်ကျယ်ပြန့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း, သတ္တုဗေဒ, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, ရထားလမ်း, ရေထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန...
မေးရိုးနယ် crank link ကိုယန္တရားချမှတ်။ ထို့အပြင်အဆိုပါပြောင်းလဲနေသောမေးရိုးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုပြောင်းရွှေ့လမ်းကြောင်းက၎င်း၏အလယ်ဗဟိုအဖြစ် mandrel နှင့်အတူတစ်ဦးကို arc ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမြို့ပတ်ရ...
ဆွဲငင်အားသဲခွဲထုတ်စက်ဖောက်သည် '' တုံ့ပြန်မှုများနှင့်လိုအပ်ချက်အရသိရသည် Tarzan အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးခွဲထုတ်အမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းနှင့်မော်တာမပါဘဲအတူတကွ...
သဲများနှင့်အမှုန့် separator ကမ္ဘာကြီးကိုနည်းပညာခွဲထုတ် advanced စုပ်ယူနည်းပညာတက္ကသိုလ်ဘေဂျင်းတက္ကသိုလ် silicates အင်ဂျင်နီယာဌာနတို့ကသုတေသနပြုသောရဟတ်အမျိုးအစား separator အပေါ်အခြေခံသည်။...
လိမ်ခွဲထုတ်သို့မဟုတ်လိမ်အစိုင်အခဲအမှုန်များနှင့်အရာ mechancal တန်း၏တစ်ဦးကိရိယာများ၏အချိုးအစားအားဖွငျ့ကွဲပြားခြားနားသောအမြန်နှုန်းမှာအရည်အတွက် precipitated ရာသတ္တုရိုင်းတစ်သင်းလုံးကကစားသမားထုတ်လုပ်မှု...
စက်ယန္တရားအောင်တရုတ်သဲချမှတ်ခြင်းစက်ရုံသို့မဟုတ်သဲထိုသို့သောရိုင်းခေါင်းပုံဖြတ်, ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်မှု, ဆန့်ကျင်ဘက်ကိစ္စ, အရိုင်း clinker, emery, ဖန်အတုဆောက်လုပ်ရေးသဲ, ကျောက်များနှင့်အခြားသတ္တုဗေဒ slurr...
မိုဘိုင်းကြိတ်ခွဲစက်အမျိုးအစားအဖြစ်ရော်ဘာ-tyred မိုဘိုင်းကြိတ်ခွဲစက်ရုံ, ကျယ်ပြန့်သတ္တုတွင်းကြိတ်ခွဲ, ဆောက်လုပ်ရေးစွန့်ပစ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ရေးစွန့်ပစ်ထုတ်လုပ်မှု, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်မီးရထားလမ်းဆောက်...
အဆိုပါကြီးမားသောအရွယ်အစားသွေးခုန်နှုန်းဂျက်အိတ် filter ကိုအဓိကအားကြောင့်သီးသန့်စစ်ထုတ်ရန်ဧရိယာကြီးမားခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလျှောက်လွှာ၏ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုဓာတ်အားပေးစက်ရုံ, သံမဏိ, Non-ferrous...
ခါးပတ်ပေါ်ကိုအဆိုပါပေါ်ကိုရဲ့တင်စွမ်းရည်, ဆက်သွယ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်မျှမျှတတဘောင်အလေးချိန်တိပ်ကနေတဆင့်အလျင် transducer ၏သွေးခုန်နှုန်းကို output အချိုးအစားတိုင်းတာသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာပြီးနောက် devi...
အဆိုပါတုန်ခါလမ်းခွဲကိုလည်း vibratory လမ်းခွဲသိုလှောင်ဘင်ထဲကနေစဉ်ဆက်မပြတ်နဲ့တစ်ပုံစံတည်းလက်ခံသည့်ကိရိယာဖို့အမြောက်အများနှင့်အမှုန်ပစ္စည်းများအစာကျွေးရန်အသုံးပြုသည်ကိုခေါ်။ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအောင်သဲထဲမှာ...
(English ပီများအတွက်) ဖုန်းနံပါတ်: +86-13795222925